कसरी स्लिम र राम्रो देखिने? - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / Beauty Tips / कसरी स्लिम र राम्रो देखिने?
कसरी स्लिम र राम्रो देखिने?
By Digital Khabar on December 15, 2013
फोटोमा राम्रो देखियोस् भन्ने चाहना कसको हुँदैन र? तर, सामान्य कुरा थाहा नहुँदा प्रायः महिला आफ्नो भद्दा शरीरलाई क्यामेराको लेन्सअगाडि लुकाउन सक्दैनन्।सबैभन्दा पहिला
फोटो खिच्दा ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा ‘पोस्चर’ हो। पोट्रेट फोटोग्राफर नतासा पेजेन्कीका अनुसार फोटो खिच्न उभिँदा आफूलाई सकेसम्म अग्लो र पातलो देखाउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसका लागि एउटा आफ्नो शरीरको बीच भागबाट माथि गइरहेको छ र त्यसले शरीरलाई माथि खिचिरहेको छ भन्ने सोच्नुहोस्। त्यसै प्रकारमा उभिनुहोस्। आफूलाई कुनै मोडलभन्दा कम नआँक्नुहोस्। आफूलाई फोटोमा सानो देखाउन खोज्नुभयो र तन्किनुभएन भने तपाईं मोटो देखिनुहुनेछ।
फोटो खिच्दा कहिले पनि आँखा बन्द गर्नु हुँदैन। त्यसैले फोटोग्राफरले खिच्न जति नै समय लगाए पनि आँखालाई खुल्लै राख्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। राम्रोसँग आँखा नखुलेको फोटोमा तपाईं धेरै नशामा पगरेर लठि्ठएको जस्तो देखिनुहुनेछ।
फोटो खिच्दा चिउँडोलाई गर्दनमा जोड्नु हुँदैन। तपाईं जति नै स्लिम भए पनि चिउँडोलाई गर्दनमा जोड्नुभयो भने दुईवटा चिउँडो भएको मोटो मान्छेजस्तो देखिन्छ। राम्रो फोटोका लागि चिउँडोलाई गर्दनबाट माथि उठाएर अनुहारलाई क्यामेराभन्दा दायाँ वा बायाँ मोड्नुहोस्। तर, त्यसो गर्दा आँखाले भने सिधा लेन्समै हेर्नुहोस्।
कम्मर सानो देखाउन
यदि एक्कासि तपाईंतिर क्यामेरा तेर्सियो भने या त आफ्नो पेटमाथि हात बाँधेर उभिनुहोस् या दुवै हातलाई कम्मरमाथि राख्नुहोस् र पोज दिनुहोस्। यसो गर्दा तपाईंले लुकाउन खोजेको शरीरको भाग सजिलै लुक्छ।
हिप सानो देखाउन
यदि तपाईंको हिप ठूलो छ भने क्यामेराको अगाडि कहिले पनि ठिंग नउभिनुहोस्। वा पूरै एकातिर फर्केर पनि उभिनु हुँदैन। त्यसरी उभिँदा तपाईंको पेट, कम्मर र हिप सबै भद्दा देखिन्छ।
शरीरलाई अंग्रेजी अक्षर ‘एस’ आकारमा बंग्याउनुहोस्। जसले गर्दा तपाईंको हिपको बनोट राम्रो देखिन्छ। एउटा खुट्टालाई थोरै अगाडि राख्नुहोस् र आफ्नो शरीरको सम्पूर्ण भार पछाडिको खुट्टामा दिनुहोस्। अब अगाडि भएको खुट्टाको हिललाई हल्का उठाउनुहोस्। यसो गर्दा तपाईंको शरीरको ब्यालेन्स मिल्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको दुवै हातलाई एकै तरिकाले नराख्नुहोस्। र, हातलाई हिपमा राखेर प्रेस गर्नु पनि हुँदैन।
ढाड सिधा राखेर बस्नुहोस्
बसेर फोटो खिच्दा कहिले पनि क्यामेरालाई सिधा फेस गर्नु हुँदैन। शरीरलाई केही दायाँ वा बाँया घुमाएर बस्नुपर्छ। होइन भने तपाईंको हिप, तिघ्रा र घुँडाको आकारले फोटो भद्दा आउँछ। र, खुट्टालाई एकअर्कामा खप्टिँदा फोटो अझ राम्रो आउँछ।
बसेर फोटो खिच्दा दुइटा घुँडालाई जहिले जोडेर राख्नुहोस् र हातलाई तिघ्रामाथि नराख्नुहोस्। पेट लागेको छ भने पेटलाई भित्र तानेर ढाड सिधा पार्नुहोस्।
महत्वपूर्ण कुरा बसेर फोटो खिच्दा कहिल्यै पनि कुर्सीको प्याड घुँडाको तलबाट देखिनु हुँदैन। त्यसैले कुर्सीको छेउमा सिधा भएर बस्नुहोस्। पछाडी ग्याप भए केही फरक पर्दैन।
सोसल मिडियामा पोष्ट…
फिट हुनका लागि डाउनलोड
← Previous Story डार्क सर्कल हटाउने घरेलु उपाए
Next Story → A New Take on the Avon Lady